Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseSeychelles » ISeychelles Yenza Umaki Wayo Ophumelelayo e-IFTM Top Resa
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • France Izindaba Ezintsha • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Ukwakha kabusha • Izindaba zaseSeychelles • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba
AmaSeychelles e-IFTM Top Resa
ISeychelles ibambe iqhaza embukisweni wayo wokuqala wokuhweba kwezokuvakasha selokhu kwaqala i-COVID-19 eParis ngesonto eledlule embukisweni we-2021 IFTM Top Resa, umbukiso omkhulu wezentengiselwano waseFrance obekelwe ezokuvakasha.
Imibukiso yezohwebo efana ne-IFTM Top Resa, ekumagazini wayo wama-43, ingamathuluzi abalulekile cishe kunoma yiluphi uhlobo lwebhizinisi okubandakanya ezokuvakasha.
Kwakuyithuba elihle lokukhombisa imikhiqizo yaseziqhingini kwezohwebo nezokuxhumana.
Imicimbi efana ne-IFTM Top Resa ivumela umuntu ukuthi akhe imigwaqo yokuthengisa futhi futhi iyithuba elibalulekile lokuxhumana nabantu.
UBernadette Willemin, uMqondisi Jikelele Wezokumaketha Kwendawo Yezokuvakasha eSeychelles, obehola ithimba lamalungu amahlanu esiqhingi emcimbini obusePorte de Versailles enhlokodolobha yaseFrance kusuka ngo-Okthoba 5, 2021, kuya ku-Okthoba 8, 2021, uthe ekubuyeni kwakhe eziqhingini ukuthi “i-IFTM Top Resa iyisibonakaliso sokubuyela empilweni ejwayelekile njengoba ibeka indlela yokuqaliswa kabusha kwale mboni. Umbukiso wezokuhweba ubuyithuba elihle lokukhangisa ngemikhiqizo yasesiqhingini kwezohwebo zokuvakasha nakumaphephandaba kanye nokuletha okuhlangenwe nakho okuhlukile okunikezwa izivakashi.
Imibukiso yezohwebo efana ne-IFTM Top Resa, ekumagazini wayo wama-43, ingamathuluzi abalulekile cishe kunoma yiluphi uhlobo lwebhizinisi. Ivumela umuntu ukuthi akhe imikhondo yokuthengisa futhi ahlinzeke ngamathuba okuguqula inzalo ibe ngumholi ofanelekayo. Futhi kuyithuba elibalulekile lokuxhumana nabantu namabhizinisi avela embonini kanye nokwazisa ngebhizinisi lethu nomkhiqizo wethu.
Ezinsukwini ezine sibe nethuba lokuxhumana, sixoxe futhi sivumelane ngeziphakamiso nabalingani bethu ngezindlela nangezindlela zokuqhubeka nokukhulisa ibhizinisi lethu sonke. ”
UNkk Willemin ubike intshisekelo eyengeziwe eSeychelles ngabalingani bezohwebo baseFrance abeza nemibono emisha ehlose ukubambisana ukugqugquzela iziqhingi zaseSeychelles. "Sihlangane nabo bonke osomabhizinisi bethu abakhulu, zonke izindiza ezahlukahlukene ezindiza lapho siya khona - abathwali abavela e-Europe, Middle East, abathwali base-Afrika futhi okungenani, inkampani yezindiza yaseFrance elungiselela ukuqala ukusebenza ekupheleni kwalokhu inyanga. Sibe nezingxoxo ne-Emirates, i-Etihad, iQatar Airways, amaTurkey Airlines, iKenya Airways, i-Ethiopian Airlines kanye ne-Air France. Abezindaba nabezindaba bebekhona lapho behlangana khona nemihlangano nezingxoxo eziningi okubalwa nesinye esinesiteshi esaziwayo sethelevishini i-TF1, ”kusho uNkk Willemin.
Ukuhweba ngezokuvakasha kwakumele kulo mbukiso ngabamele phesheya kwezilwandle iCreole Travel Services, iMason's Travel, iBerjaya Hotels Seychelles neMango House Seychelles, kanye neBlue Safari Seychelles neNorth Island. UNkk Willemin, obephelezelwa yi-Tourism Seychelles Marketing Executive - France & Benelux ezinze eParis, uNkk. Jennifer Dupuy, uzwakalise ukwaneliseka ngomphumela wohlelo lwalo nyaka lombukiso wezokuhweba.
“Ozakwethu abebekhona bonke bashiye isitendi benelisekile. Sibabonga ngobuqotho bonke futhi sinethemba lokubona ukubambisana nobambiswano oluvela embonini yezokuvakasha yaseSeychelles ngokubanzi ukuqhubeka nokukhulisa imakethe, esivele ikhombisa uphawu oluhle lokuthuthuka ngokwezibalo zokufika. ”
Ukuqinisekisa lokhu kuhlolwa, omele iMason's Travel u-Olivier Larue uthe, “Sijabule ukuhamba nalokhu Ezokuvakasha Seychelles kulo mcimbi wokuqala wamanje wamazwe omhlaba kanye nabanye ozakwethu bezohwebo kanye nokuqhakambisa ngokuziqhenya umkhiqizo wethu nendawo esiya kuyo ngokubanzi. Bekukhuthaza kakhulu ukubona inani lababekhona kakhulu ekuqaleni kombukiso kanye nomdlandla nesimo esihle sabalingani bezohwebo jikelele. ”
Kwethulwa Imiklomelo Yomhlaba Oqinile: Ukuthuthukisa Isimo Sezulu ...
Ikhilikithi laseNew Zealand likhansela ngokungazelelwe ukuvakasha kwePakistan ...
Ezokuvakasha Seychelles Zikhahlela Ukukhangisa Kwonyaka Maphakathi Nonyaka ...
ITurkmenistan ivula indawo yayo yezindiza eya e-Afghanistan ...
India - Ezokuvakasha kanye Nokuvakasha kweKazakhstan: Kuyini ...
Izindiza zaseSan José eziya eReno-Tahoe kumaSouthwest Airlines ...
I-US igcina imingcele yomhlaba neCanada neMexico ivaliwe ...
I-United Airlines: Thola i-COVID-19 jab noma ulahleke
I-Australia izovula kabusha umngcele wayo ukuze kugonywe ngokuphelele ...
UNgqongqoshe Wezokuvakasha waseSeychelles uvakashela amancane ...
IBahamas yamukela uhambo olusha lweCrystal Cruises ...
Ngubani uNgqongqoshe Wezokuvakasha Omusha wase-Iran uMhlonishwa. Kuboshiwe ...
I-COVID-19 furlough iphela ngesikhathi esibi kakhulu kwezokuvakasha e-UK
Ukuphahlazeka Kwendiza Encane Emakhaya Omakhelwane: 2 ...
UBoeing ubiza iSekela likaMongameli likaHulumeni omusha ...
Izindiza ezihlukanisayo eziya eSingapore manje neLufthansa